पटाका पड्काए क्यान्सर लाग्ने ? – Saurahaonline.com
पटाका पड्काए क्यान्सर लाग्ने ?
काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारलाई रंग र प्रकाशको पर्व मानिन्छ । यसका साथै यस पर्वमा पटाका पड्काएर रमाइलो गर्ने चलन पनि रहँदै आएको छ ।
तर तपाईंलाई थाहा छ, पटाका, भुईचम्पा लगायतका हामीले रमाइलोका लागि पड्काउने पदार्थको असरले क्यान्सरसम्मको रोग निम्त्याउँछ भनेर रु
भुई चम्पा र पटाकाबाट निस्केको आगोले भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको, मानिसको दृष्टि गुमेको त हामीले सुन्दै आइरहेका छौं । यतिमात्र होइन यसबाट निस्कने धुँवाले बनाउने वातावरण प्रदुषणबाट फोक्सो संक्रमण, हृदयघात र क्यान्सर ९अर्वुद रोग० हुन सक्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छन् ।
पटाका पड्काउँदा निस्कने सेतो ज्वालामा अलिमुनियम रहेको र यो दिमाग र फोक्सोका लागि हानीकारक रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यस्तै पटाकाबाट निस्कने रातो ज्वालामा लिथियम र स्ट्रोनटियम हुन्छ । जसबाट बच्चाको हड्डिको विकासमा असर पार्ने गर्दछ ।
अझ चिन्ताको विषय यो छ कि यसमा अर्वुद रोगको कारक तत्व र हर्मोनलाई असन्तुलित पार्ने तत्व समेत बारुद र पटाकामा हुन्छ । पटाका बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न रासायनिक पदार्थबाट हावामा सल्फर डाइअक्साइड, कार्वोन डाइअक्साइड र कार्वोन मनोअक्साइडजस्ता विषालु ग्यासबाट फोक्सोको क्यान्सर र क्रोनिक व्रोङकाइटिस रोग लागी अकाल मै मृत्यु हुने सम्भावना अधिक छ ।